Nhau Blog yeIndi Tagged "Varaidzo" - THE INDIAN FACE
Tsvaga yakanakisa YouTube kune Mp3 vashanduri
Iwe uri pachikuva chemimhanzi uye haugone kuwana rwiyo chairwo kana iyo remix iyo yawakangonzwa paYouTube, asi unoida pa play play kubva nhasi! Usatombo kunetseka, isu takagadzirira runyorwa rweakanakisa maturusi ekushandura mavhidhiyo kubva YouTube en Mp3 uye iwe unogona kuitora pane yako nhare uye kuiteerera iyo kakawanda sezvaunoda, chero kwaunoda!
Mumhanzi wakanakisa wemitambo
Waizviziva here izvozvo pakuita mitambo ne mimhanzi Unogona here kudzikisa kuneta kwemhasuru nekuvandudza yako kurova kwemoyo uye kutsungirira uchidzidzira? Muchinyorwa chedu nhasi, tinokuratidza sarudzo dzakanakisisa mu play play chii chaungawana mu Spotify kana chero imwe chikuva. Chinhu chakakosha ndechekuti iwe ugadzire izvi zvinosanganiswa nenzira yekuti vagadzikise nhanho yekudzidzira kwako uye vaendese kune imwe nhanho!
Kufamba paIsita nekuda kweGoogle Earth
En The Indian Face Tinotenda kuti unokwanisa kunyatsoshandisa mazuva ekuzorora, ndosaka ichi chinyorwa chinokupa iwe kwakawanda nzvimbo dzekufamba muEaster 2021 iyo iwe zvawanga usati waziva izvozvi, kwaunogona kuenda uchibva kumba… Hautitendi here? Tsvaga kuti ungafamba sei kubva kumba uchitenda kuGoogle Earth.
Pamusoro gumi akanyanya mitambo yemakwikwi uye zviitiko
Tsvaga yakanakisa mitambo yemakwikwi uye zviitiko muEurope nepasi!Pane zvakawanda zvekusangana zvinoitika munyika, kubva kune zvakavanzika uye zvakanyanya kwepakutanga, kusvika kune yakasarudzika, ngano uye "inowanzoitika". Verenga uverenge uye dzidza nezvemakwikwi gumi akanyanya kwazvo munyika.
GADZIRA MABHUKU PAZVINHU ZVINOGONESA
Kana isu tichifunga nezve yakanyanyisa mitambo chinhu chekutanga chinouya mupfungwa ndeyekudyara uye adrenaline. Kudzivirira zvakasikwa uye kuyedza chimiro chedu chemunhu kunotitungamira kuti tinzwe tiri vapenyu munzira. Asi kumashure kwechitambo chimwe nechimwe, panogara paine nyaya hombe ... nyaya yechokwadi! Kune varume vakashinga chaiko, munzvimbo chaidzo.
8D Rwiyo: Ndeupi 8D mimhanzi uye nei uchifanira kutanga kuiteerera?
Kana usati wanzwa nezve 8D mimhanzi kana 8-mimhanzi mimhanzi parizvino, iyi post ichaita kuti uregedze kubuda. Iyo mhando yemimhanzi yakagadziridzwa kune tekinoroji modhi iyo inotonhorera chaizvo uye ichaita kuti iwe unzwe zvinhu zvausati wamboona munziyo dzechivanhu.
Yekutanga Triple Backflip BMX muNhoroondo: inoshamisa
Iyo New Zealand BMX mutasvi. Jed Mildon akaita nhoroondo muna Chivabvu 28, 2011 nekuve wekutanga kubudirira kutasva bhasikoro rake mushure mekuita kasiteki kumashure panguva yeTr T3 Mindtrick Jam muTaupo, New Zealand. Mildon, uyo aive makumi maviri nemaviri panguva iyoyo
Kuenzanisa zvakanakisa snowboarding matangi a2014
Tauya pamusoro pevhidhiyo iyi inorongedza matanho akanakisa uye kusvetuka mudenga rechando yakaonekwa paInternet gore rakapfuura ra2014. Mublog rino tajaira kutaura nezve nyeredzi, matarenda makuru, vatambi vetsiva uye hukasha hwechokwadi bhodhi uye skis
Ratidzo BASE kusvetuka: mavhidhiyo maviri ausingagoni kupotsa
Nhasi tinounza mavhidhiyo maviri ekuratidzira eBASE Kusvetwa naRichi Navarro, yedu BASE jumper kubva kuchikwata The Indian Face. Yekutanga yavo kusvetuka kwemashiripiti, mune munhu wekutanga, kubva paragliding pachiteshi cheBoí-Taüll (Lleida). Zvikuru. Yechipiri ndeimwe mbiri kusvetuka kubva kumuvhimi we adrenaline uyu
Bhuku rakakurudzirwa: Chingoro
Nhasi tinokuunzira kurudziro yebhuku rinonyanya kubatsira kana rako riri echando muchidimbu mune fremu modhiyo. Inodaidzwa kuti “Snowboarding: Freform Tricks uye Matekiniki” naAlexander Rottmann; Shanduro yazvino yekutanga ndeye kubva ku2010, inowanikwa muSpanish uye ine mapeji 160 eruzivo nezvekugadzirira
Izvo zvisinga nzwisisike zvigadzirwa zvekutsvedza pane chando
Snoogee Bhodhi Pfungwa iri nyore, chinja muviri bhodhi kuchando. Nekudaro, mhedzisiro inoguma iri kure nekuratidzika kunge iri fashoni. Zvinogona kuve zvinonakidza kwechinguva, zvinokwanisika, asi kana iwe ukaisa mari muhomwe yepasiki unogona kusada kuishandisa kurira nekutsvedza
Runyorwa pamusoro pekushandurwa kwemitambo yakanyanya paCanal Historia
Nhasi tinogovana newe gwaro pane iyo Nhoroondo Channel iyo inovandudza shanduko uye inoshungurudza yemitambo yakanyanyisa kupoterera kupota nyika, zvese mumvura nechando, pamwe nemimwe isingawanzo uye mimwe mitambo mitsva yakabuda mumakore apfuura.
Mavideo akanakisa aElias Ambühl
Isu takambotaura nezvaElias Ambühl mune chinyorwa pane iyi blog paJanuary 24. Mariri tinokuudza kuti Elias akaberekwa munaKurume 26, 1992 uye kuti ari muSwitzerland freiketi skier. Akakwikwidza muchikamu cheinosimukira kumutambo we 2013 FIS Fredown World Ski Championship.
Kwakatangira Skate: zvinyorwa zvembwa neZ-Boys
Kana nhasi uine imwe nguva yemahara uye usingazive chekudyara mari yacho, tinokurudzira kuti utarise ino yakanyorwa. Iri ndiro gwaro reFittown uye The Z Boys, rakanyorwa muchiSpanish, kubva 2001 uye rakatungamirwa naStacy Peralta.
Isu Tinotasva: iro rakanyorwa renhoroondo yeChando
Semunhu anoda adrenaline uye snowboarding yauri, nhasi tinokuunzira iyo zvinyorwa kuti iwe haugone kumira kutarisa ... ichi ndicho Isu Ride: zvinyorwa zve nhoroondo yeSkyboarding. Ruoko rwakabata pamwe chete neBurn uye inogadzirwa neGrain Media, Isu Tinotasva inonakidza zvinyorwa pamusoro penyaya yenhoroondo yechando.
Candide Thovex's inoshamisa freestyle ski vhidhiyo
Candide Thovex akabata zita reimwe renyeredzi huru pane zvakasikwa freeski. Sezvo iye amene agara achiti: "Ndakarega siki ichindimiririra." Nhasi tinokuunzira vhidhiyo inoratidzira iyi freeski incloso maunogona kunzwa unokwezva mutsika mumunhu wekutanga.
Bhodhi isinganzwisisike kune ese skate uye echando
Nhasi tinoda kuyedza kukushamisa neiyi vhidhiyo yatakawana uye yatipumha kure. Ivo vakomana paSignal Snowboards vakagadzira uye vakashanda pamwe nechikwata cheLithe, bhodhi iro rinogona kushandiswa kukwikwidza asi zvakare kuenda naro kuchando kuenda kuchando.
Yakanakisa yeGomo Bike muna 2014
Nhasi tinoda kugoverana newe uye kukuratidza iwo akanakisa eGomo Bike mavhidhiyo akaitwa muna 2014 Hondo yeCairns 2014 Spectacular yepasi pegomo Mountain Bike kukwikwidza kwakaitika musango rakachengetedzwa pazuva rinonaya. Izvo zvakakodzera kutarisisa.
Mavhidhiyo akanakisisa e skate muna 2014 zvinoenderana naRed Bull
Mavhidhiyo ematehwe emhando yepamusoro muna 2014 zvichienderana neRed Bull Nhasi tinoda kukuratidzira kopi yemavhidhiyo epamusoro skate akanyorwa mugore ra 2014, kubva pamaonero emutambi mukuru akanyanya mutambo: Red Bull. Nakidzwa nayo! Yakarasika muOddos: iro ghost guta Iri boka re skateboarders kubva kutenderera nyika
10 yakakurudzirwa mabhuku e skate
10 yakakurudzirwa mabhuku skate Passionate nezve bhodhi uye skate, nhasi tinokurudzira kuverenga gumi kwaunofanirwa kufunga nezve hongu kana hongu. Fuck imi magamba Iri bhuku rinounganidza rekutora mifananidzo rakatorwa naGlen E. Friedman nezvenyika dzepunk, hip hop uye skate. Zboys mavara akaenzanisirwa
Frechester nhabvu: mavhidhiyo maviri eanonakidza ebhora trick
Frechester nhabvu: mavhidhiyo maviri eanonakidza bhora trick Kana iwe uchida bhora uye freestyle, iyi mifananidzo haingakusiye iwe usina hanya. Kana iwe usingafarire nhabvu uye unofarira skateboarding kana chando mitambo, isu tinofunga uchafarira zvakare kuwana izvo vamwe vanogona kuita nebhola.
Iyo inonyanya kufarirwa mitambo yePrime / yezhizha
Mitambo yakakurumbira yakanyanya yekutenderera / yezhizha PUENTING Bungee kusvetuka mutambo wakanyanyisa apo munhu wacho anozviparura kubva pakukwirira kwakakura kupinda kune iyo yakasviba yakaitirwa pakutanga kwekutanga netambo yeanorema. Bungee kusvetuka kunogona kuitwa kubva kune akawanda maficha, akadai semabhiriji, zvivakwa zvekumusoro, makoronga
Nzira yekukwira sei yakavakirwa matanda bike ramp
Nzira yekukwira sei yakavakwa yamatanda bhasiketi ramp Sergio Layos ndiyo imwe yakakosha BMX vatasvi nhasi. Nguva yekutanga yaakatasva bhasikoro rakadaro, aive aine makore gumi nemaviri. At 11, iye aive wechipiri muPortugal World Championship
Didga iyo skater katiti ndiyo nyeredzi mune yake skatepark
Kana iwe uchida kitsi uye zvakare skate, tawana vhidhiyo iyo isingazokusiya iwe usinga farire. Muri kuenda kunoona katsi Didga, uyo ari ishe uye ishe we skatepark yake nekuti chiitiko ne skateboard. Takura uremu hwako kumashure kwesiketi, kwira kumusoro nekudzika mawere
1 2 Zvadaro